Ceni : “Tsy tokony hiadian-kevitra ny datim-pifidianana” | NewsMada
Ceni : “Tsy tokony hiadian-kevitra ny datim-pifidianana”
“Tsy afa-mihoatra ny fe-potoam-piasan’ny olom-boafidy ny voafaritry ny lalàna. Mahafantatra izany ny rehetra. Amiko, tsy tokony hipetraka ny adihevitra momba ny datim-pifidianana.”
Izay ny nambaran’ny filohan’ny Vaomieram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana (Ceni), Rakotomanana Hery, taorian’ny fandraisan’ny Pnud ny vola fanampiana avy amin’ny fanjakana frantsay ho an’ny Ceni ao amin’ny kitapom-bola hikarakarana fifidianana, teny Alarobia, omaly.
Manaja ny lalàna misy amin’izao fotoana izao ny Ceni, mandra-piandry izay lalàna vaovao. “Raha ny lalàna misy amin’izao fotoana izao: tsy anjara adidin’ny Ceni ny manonona ny datim-pifidianana, fa misy tomponandraikitra ao”, hoy izy.
Mila havoakan’ny governemanta ny datim-pifidianana
Miangavy ny governemanta izy mba hotononiny izay datim-pifidianana izay. Mba ho filaminan’ny firenentsika izany. Satria lasa misy adihevitra isan-tokony momba izany, izay tsy tsara loatra ao anatin’ny fitantanana ny fifidianana.
Tiana hapetraka amin’ny toerany avokoa ny zava-drehetra eto amin’ny tany sy ny firenena. Vaomieram-pirenena mahaleo tena tanteraka ny Ceni. Tsy misy andrimpanjakana hafa manana fifandraisana araka ambaratonga aminy, fa ny lalàmpanorenana sy ny lalàm-pifidianana no eo amboniny, araka ny nambarany.
Amin’ny fenitra iraisam-pirenena, tsy azo kitihina intsony enim-bolana mialoha ny fifidianana farafahelany ny lalàm-pifidianana. Hiasana hatramin’ny 2019 ny tahirim-bola hanatanterahana fifidianana, ary hiarahan’ny rehetra mibanjina amin’izany ny 12 tapitrisa dolara, raha ny fanazavany. 300 000 euros no natolotry ny fanjakana frantsay.
Tsy ao anatin’ny kajikajy sy paipaika politikan’ny fahefana mpanatanteraka ve ny tsy famoahana ny datim-pifidianana.